Atari sonyekwara ochie na obere ejiji na Ataribox | Akụkọ akụrụngwa
Atari sonyekwara ochie na obere ejiji na Ataribox
Nostalgic nnabata, were igbe anụ ahụ gị, bia lee anya, anyị ga-ekwu maka otu mmata ochie nke emegharịrị ọhụrụ, Phoenix nke si na ntụ ya bilie. Dị ka ọtụtụ n'ime unu tụrụ anya, Atari alaghachila n'ụdị njikwa "mini" yiri ndị ọrụ ibe Nintendo ndị jisiri ike nweta ọtụtụ arụmọrụ (ego na mgbasa ozi) na ụzọ anyị si ekwe ka onwe anyị buru anyị site na agụụ.
Fewbọchị ole na ole gara aga, Atari kpughere obere "teaser" nke abụọ nke ihe Atari Mini nwere ike ịbụ, taa anyị mechara kpughee Ataribox, ihe mgbagha nke ga - enyere gị aka ịlaghachi n'oge ị bụ nwata n'otu oge. Ka anyị hụ ihe Ataribox na-ezo na ihe kpatara na ọ na-achịkọta mkpuchi ụwa niile n'agbanyeghị nha ya.
Ke akpatre, mmo ema ekek ifiok-ukpeb ndino nnyin mme ekpri ifiok, okposuk edi nte anwanade enye ikekemke. Ma ọ bụ na ha enyeghị anyị ụbọchị mbupute ma ọ bụ ọnụahịa, naanị olile anya ole na ole anyị ga-ejidesi ike ka anyị wee ghara ịla n'iyi na nnwale ahụ. Ha ga-enwe ụdị abụọ iji bido, onye na osisi okokụre dị ka kpochapụwo Atari 2600, na otu na nwa na-acha uhie uhie na risịrị presumably na kenkowaputa plastic. (dị ka PlayStation 4 dịka ọmụmaatụ) maka ndị na-egwu egwuregwu kachasị ọhụrụ, yana maka ụdị ụlọ ọ bụla.
Ihe a ga-anabata kaadị SD ma gụọ ọdụ ụgbọ USB anọ ka ha na-ejikọ na TV site na mmepụta HDMI dị ka Nintendo Omuma Obere dịka ọmụmaatụ. Dabere na ozi sitere na Atari, njikwa ahụ nwere WiFi, ọ bụ ezie na ha akọwabeghị kpọmkwem usoro. Atari mesiri anyị obi ike na nke a bụ naanị "swiiti" iji nye anyị echiche nke ihe ga-abịa, n'ezie ọ na-esiri anyị ike ịhụ ya tupu njedebe nke 2017 ma ọ bụ mmalite nke 2018, mana enweghị obi abụọ. anyị nọ n'ihu definitive emulator.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Atari sonyekwara ochie na obere ejiji na Ataribox